January 18, 2022 AdminLeaveaComment on वैंज्ञानिकले पत्ता लगाए शा, री, रि, क सम्पर्क राख्ने नयाँ उत्तम समय !
काठमाडौं । स:म्पर्क कुन समयमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? यो सामान्य प्रश्न हो यसको उत्तर पनि मानिसहरुले अत्ति सरल रुपमा दिन्छन । जब चाहाना हुन्छ तब दुबैजनाको सहमतिमा स:म्बन्ध राख्नुपर्दछ ।यो कुरा पनि ठिक छ तर बिहान सम्बन्ध राख्नाले स्वास्थमा निकै नै फाइदा पुग्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
हेल्थ एन्ड फिटनेस कम्पनी फोर्जा सप्लीमेन्टको एक अध्ययनले विहानको समयमा सम्बन्ध राख्नाले तनाव कम हुने र दिनको सुरुवात पनि राम्रो हुने देखाएको छ । बिशेषगरी बिहान साढे सात बजेको समय बेष्ट हुँने अध्ययनले देखाएको छ ।अध्ययनमा सहभागि मानिसहरुले बिहानको समय स : म्बन्ध राख्नाले पुरै दिन मु ड फ्रे श रहने बताए ।
स:म्पर्क कुन समयमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? यो सामान्य प्रश्न हो यसको उत्तर पनि मानिसहरुले अत्ति सरल रुपमा दिन्छन । जब चाहाना हुन्छ तब दुबैजनाको सहमतिमा स:म्बन्ध राख्नुपर्दछ ।यो कुरा पनि ठिक छ तर बिहान सम्बन्ध राख्नाले स्वास्थमा निकै नै फाइदा पुग्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
यसको एक लो”जिकल कारण भनेको बिहानको समयमा पुरुषको टे:स्टो:स्टेरोन लेभेल निकै उच्च रहन्छ । जसले गर्दा उक्त समय सम्बन्ध राख्दा निकै जोशिलो र धेरै समय टिक्ने हुन्छ । पुरा भिडियो हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्
यी यु’वतीलाई अँ’गालो हालेर सुताउने अचम्मको जागिर १ घण्टाकै ८ हजार तलब